राप्ती अस्पतालमा चिकित्सक अभाव « प्रशासन
प्रकाशित मिति : 8 August, 2018 11:15 am
दाङ । दश वर्षअघि जनसहभागितामा निर्माण गरिएको तुलसीपुरको राप्ती अञ्चल अस्पताल डेढ वर्षदेखि निमित्तको भरमा सञ्चालनमा छ ।
“अस्पताल छ, डाक्टर छैनन्,” स्वास्थ्य उपचार गराउन आउनुभएकी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ का राधा पाण्डेयले भने, “कर्मचारीले घोराही अस्पताल जान सल्लाह दिएका छन् ।” यहाँ उपचार गराउन आउने अधिकांश बिरामीले यस्तै गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
उक्त अस्पतालमा १४ विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ । हाल यहाँ पाँच चिकित्सक मात्र कार्यरत रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । अस्पतालमा मेडिकल सुपरिडेण्डेन्टका रुपमा कार्यरत डा. भोला श्रेष्ठ डेढ वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालमा काज सरुवा भएर गएपछि हालसम्म अस्पताल निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. विनोद सिंहले निमित्तको रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।
अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट सिंह पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको बताउँछन् । उनले भने, “एनआइसीयु सञ्चालनका लागि सामग्री आएको छ, दक्ष जनशक्तिका कारण सेवा दिन सकेका छैनौँ ।”
वि.सं. २०६५ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रुपमा रहेको उक्त अस्पतालको स्तरवृद्धि गरी राप्ती अञ्चल अस्पताल बनाइएको हो । सो क्षेत्रका नागरिकले महापुराण लगाएर संकलन गरेको दुई करोड तथा पाँच बिघा जग्गा अञ्चल अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेका थिए । यहाँ प्रदेश नं ५ का दाङ, रुकुम, रोल्पा तथा कर्णाली प्रदेशको सल्यान, जाजरकोटलगायत जिल्लाबाट बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । उचित उपचार पाउन नसकेपछि बिरामी बाँकेको कोहलपुर, बुटवल, काठमाडौं तथा भारत जाने गरेका छन् । रासस